The Da Vinci Code လိုမျိုး ခုတလော အင်တာနက်မှာ The Lui Liu Code လို့ ထင်ရှားနေတဲ့
တရုတ်-ကနေဒါ ကပြားဖြစ်တဲ့ ပန်းချီဆရာ Lui Liu ရဲ့ ပီကင်း၂၀၀၈(Beijing 2008 )
၂၀၀၅မှာ ရေးဆွဲပီးစီးတဲ့ပန်းချီကားကို နောက်တနှစ် New York art fair တခုမှာပြပွဲတင်ခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်ကာလရဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးသရုပ်များလျို့ဝှက်အဓိပ္ပါယ်မျိုးစုံနဲ့ ပြည့်နှက်နေ တဲ့ ပီကင်း၂၀၀၈ (Beijing 2008 ) ပန်းချီကားမှာ မိန်းမ ၅ ယောက်ပုံကိုရေးဆွဲထားတဲ့ မာဂျောင်ကစားဝိုင်းတ၀ိုင်းရဲ့ပုံပါ။
ပန်းချီကားကပေးတဲ့ အတွေးများမှာ ပုံထဲက ကျောကိုဆေးမင်ကြောင်ချယ်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးလေးဟာ တရုတ်ပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဘယ်ဘက်က ကစားဝိုင်းကို အာရုံစူးစိုက်နေသူလေးကတော့ ဂျပန်ပါတဲ့။ ည၀တ်အကျီင်္နဲ့ ခေါင်းကို နောက်လှန်ထားသူကတော့ အမေရိကန်မယ်လေးဖြစ်ပြီး ကြမ်းပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာကတော့ ရုရှားမိန်းကလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးနားမှာရပ်ကြည့်နေတဲ့ကလေးမလေးကတော့ ထိုင်ဝမ်သူလေးပါ။
ဖော်ပြပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ တရုတ်ရဲ့ စစ်အင်အားနဲ့ လက်နက်အင်အားတို့ဟာ စားပွဲပေါ်မှာ အဆင်သင့်ရောက်နေပြီလို့ ပြသထားပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာတော့ တရုတ်ဟာ နေရာကောင်းရထားသလိုလိုရှိနေပေမဲ့လည်း မိန်းကလေးရဲ့ တစ်ခြားလက်တစ်ဖက်ကို မြင်ခွင့်မရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မိန်းကလေးဟာ နောက်လက်တစ်ဖက်ကလည်း စားပွဲအောက်မှာ ၀ှက်ကစားနေပါသေးတယ်။
ေေေ နောက်ဆုံးဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန်ကြားမှာပဲ ရှိနေတာထင်ရှားလှပါတယ်။ အနီးကပ်ထပ်ကြည့်ရင်တော့ အမေရိကန်က ကစားအားရှိနေသေးပေမဲ့ ကစားနေတာက တရုတ်မာဂျောင်ပါ။ အနောက်တိုင်းပိုကာ ကစားနည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ရဲ့ ကစားပွဲစည်းမျဉ်းတွေနဲ့ ကစားနေပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန်နိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်း ဘယ်လောက်များရှိနိုင်ပါ့မလဲ။
Lui Liu ရေးတဲ့အခြားပန်ချီကားတခုပါ။
Posted by U NU OF BURMA at 12/31/2013 07:56:00 AM0comments Links to this post
၂၇ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပွဲ
Sea Games ဖွင့်ပွဲ မကြည့်လိုက်ရတဲ့သူများ အတွက်ပါ
ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ သိကျွမ်းသလောက် အာဆီယံ ဒေသတွင်းက သတင်းထောက်တွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ အင်ဒိုဆီးဂိမ်းစ်တုန်းကနဲ့ ဘာကွာလဲ မေးမြန်းကြည့်မိတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါပဲ . . . . ဒီလောက်ခမ်းနားတဲ့ ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူးတဲ့ . . . အိုလံပစ်ဂိမ်းဖွင့်ပွဲကြနေတာပဲတဲ့ . . . .။ မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဒီလောက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံပြီး . . . . လူအင်အား . . . .ပစ္စည်းကိရိယာ စုံစုံနဲ့ လုပ်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထား မိဘူးတဲ့ . . . ။ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကတော့ ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ မင်းတို့နိုင်ငံက တော်တော်ချမ်းသာတာပဲတဲ့ . . . . .. . နိုင်ငံရေး အကူးအပြောင်း ကာလမှ အဘက်အဘက်မှာ ယို့ယွင်းနေဆဲ့ ကာလ ဖြစ်နေတဲ့မို့ ဒီလောက် ဘဏ္ဍာငွေတွေ မသုံးသင့်ဘူးလို့ ဝေဖန်ကြသူတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုမြင်တယ် . . . နှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင် အာဆီယံ ဒေသတွင်း နိုင်ငံသား အချင်းချင်းကတောင် အနှိမ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးအတွက် ပြန်လည် ဂုဏ်ယူရမယ့် အချိန်ကို ရောက်လာတာပါပဲ။ ပြည်သူတွေ အားလုံးမှာရှိနေတဲ့ အငုံစိတ်လေးကို ဖွင့်ပေးလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ငွေကြေးဘယ်လောက်ကုန်ကုန် တန်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါကို အငုံစိတ်ပျောက်ပြီး ဂုဏ်ယူနေရုံနဲ့ မပြီးဘူး။ ဆီးဂိမ်းစ်ထက်ကြီးမားတဲ့ Asian Games လိုပြိုင်ပွဲတွေကနေ ကမ္ဘာအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေပါ ဆက်ကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ပိုကြိုးစားဖို့ ပိုပြီး အလုပ် လုပ်ကြဖို့လိုမယ် ထင်တယ်။ Congratulations ...... Officials
ဆီး ဂိမ်း မှ တာဝန်ရှိသူများ အခန်း၊
သူ့ ကျွန်မ ခံပြီ ဇာတ်လမ်းကို ပြန်မှန်းသတိရနေပါသည်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ အားကစားပွဲ အတွက် ဖွင့်ပွဲနဲ့ ပိတ်ပွဲ အပါအဝင် ပွဲစဉ်တွေ အတွက် နည်းပညာ အကူအညီ ဒေါ်လာ သန်း ၃၀-ကျော်ဖိုးကို တရုတ်ကြီးက အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ အားကစားသမားတွေကိုလည်း လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တယ်။ တရုတ် ဒု-သမ္မတ လျူယန်တုန်ကလည်း ဖွင့်ပွဲကို တက်ခဲ့တယ်။ ကူညီခဲ့တဲ့ သူဟာ တရုတ်ကြီးမဟုတ်ပဲ အမေရိကန် သို့မဟုတ် ဗြိတိန်ဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ဝမ်းသာရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အကူအညီက သူတို့တွေဆီက မလာဘူးလေ။ လာခဲ့ရင်လည်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေက ရှိနေတယ်။ ရိုလိမ်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် သတ်မှတ်ပေး ရမယ် ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ အနောက်အုပ်စုတွေက မီဒီယာ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ နေရာတွေမှာ ငွေကို ပုံအောတယ်။ တရုတ်ကြီးက အစိုးရ ပေါ်လစီပိုင်းမှာ ငွေထည့်တယ်။ ၂-ဖက်စလုံးကတော့ သူတို့ အကျိုးစီးပွါးအတွက် လုပ်ကြတာချည်းပဲ။ ဘာပဲပြောပြော တရုတ်ကြီး ဒီတစ်ခါ ကူညီတာ မြန်မာပြည်သူတွေ အတွက် အမြတ်ထွက်သွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ မကျေနပ်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။
Posted by U NU OF BURMA at 12/11/2013 08:49:00 PM0comments Links to this post
ထိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ယင့်လတ် ရှင်နာဝပ်က ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက် တင်မြောက်ခံ သူ့ အစိုးရ နုတ်ထွက်ဖို့ အတိုက်အခံတွေ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရက်ပါတီ ခေါငးဆောင်တွေရဲ့ နည်းမျိုးစုံ ပေးနေတဲ့ဖိအားကို ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ရင်း
ထိုင်းလွှတ်တော်ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်နေ့ နံနက် ၈း၄၅နာရီမှာ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အနီကထောက်ခံတဲ့ပါတီ အစိုးရဖြစ်ရင် အ၀ါက သဘိတ်မှောက်မယ် ဆန္ဒပြမယ်။ အ၀ါဖက်က လိုလားထောက်ခံသူ ရွေးကောက်ခံအစိုးရ ဖြစ်လာရင် အနီက ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်မယ် အပြုတ်တိုက်မယ်။ ဗမာလိုပြောရရင် ဂျာအေးသူ့အမေရိုက် ဇတ်လမ်းက ဆုံးစမမြင် တွဲလဲနေပါအုံး မိုးတောင်ကချုန်းတုန်းပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒီတချီ ဇတ်လမ်းတွဲက ဇတ်အခင်းအကျင်း ဆန်းသစ်သည်။ ဇတ်လမ်းသရုပ်ဖေါ် အဓိကမဟုတ် ဇတ်ကောင်စရိုက် အဓိက သရုပ်ပေါ်သည်။
ဒီမိုကရက်ပါတီကို ထောက်ခံသည့် ခရိုင် (၁၉) ခရိုင်ခန့်အား အမာခံပြုပြီး ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့မှ လာရောက် ဆန္ဒပြမည့် အင်အား တစ်သန်းနဲ့ ၂ရက်အတွင်း အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ လှုံ့ဆော်ထားခဲ့ သော်လည်း အင်အားသိန်းဂဏန်းမျှနှင့် သတင်းပတ် ​နှစ်ပတ်ကြာ ​လမ်းမပေါ်ထွက်ပြီး ​ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပြီးနောက် ​အတိုက်အခံ ​ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသည် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းများကို ဆန့်ကျင်ချိုးဖေါက်နေကြောင်း သရုပ်ပေါ်သည့်ဘ၀ကို ရောက်သွားသည်။
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီး သက်ဆင်ကို ဖြုတ်ချပစ်ခဲ့တဲ့ နောက်ပိုင်း မှာလည်း ကျင်းပသမျှ ရွေး ကောက်ပွဲတွေမှာ Thai Rak Thai ပါတီကို အသွင်ပြောင်းတစ်ဖြစ်လဲ ထားတဲ့ သက်ဆင်လိုလားတဲ့ ပါတီ ကချည်းပဲ အနိုင်ရခဲ့လို့ တက်လာသမျှ သက်ဆင်ဘက်တော်သား ဝန် ကြီးချုပ်တွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ဖြုတ်ချပစ်ခဲ့ကြရလို့ စစ်တပ်နဲ့ အပေါင်းပါတွေက ဒီပွဲကို လက်မလျှိုခြင်ကြဘူး။
ယင်းလပ် အစိုးရအဖွဲ့ကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်း မဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ဖို့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရက်ပါတီ အမတ်များက ထိုင်း လွှတ်တော်တွင်း နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့မှ စတင် ကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ခဲ့်ပြီး ၂၈ ရက်နေ့ လွှတ်တော်တွင်း မဲခွဲရာတွင် အယုံအကြည်မရှိ အဆိုရှုးံနှိမ့်ခဲသည်။
ဒီမိုကရက်ပါတီဟာ ပီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့အပြင် စစ်တပ်က ထောက်ခံထားတဲ့ ကြားက သက်ဆင် ရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ ယင်လပ်ရှင်နာဝပ်( Yingluck Shinawatra )ကို မဲအပြတ်အသပ် ရှုံးထားလေတော့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့လဲ စိမ်ခေါ်ဖို့ မရဲဘဲဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီမိုကရက်ပါတီဟာ ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ အသေအခြာပြင်ဆင်ထားကာ လွတ်တော်အပြင်က တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြည်သူ အာဏာဖီဆန်မှု အမည်တပ်ကာလုပ်ဆောင်ရန် ဒီမိုကရက်တစ် လွှတ်တော် အမတ် ဒုတိယ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဆူတက်တောင်ဆူဘန်နဲ့ အခြားသော အတိုက်အခံ အမတ်များ အမတ်ရာထူးကို စွန့်လွှတ်ပီး ဆန္ဒပြဆန့်ကျင်မှုကို ဦးဆောင်ကာ ဆန္ဒပြသမားများ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဝင်ရောက် စီးနင်းဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက် တိုင်းရဲချုပ်ရုံး သိမ်းပိုက်ဖို့ အတွက် ကြိုးစား တာကြောင့် ရဲနဲ့ ထိပ်တိုက် တွေ့ပြီး ရဲကနေ မျက်ရည်ယ်ုဗုံးတွေ ရာဘာ ကျည်ဆံတွေ သုံးရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ လူသေဆုံး ဒဏ်ရာရမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆန္ဒပြမှုများအတွက် ဆန္ဒပြ ခေါင်းဆောင် စူထေ့ပ်ကို အစိုးရက နိုင်ငံတော် ပုံကန်မှုနဲ့ ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ခေါင်းဆောင် ၄ ဦးကိုလည်း ဖမ်းဝရမ်း ထုတ်လိုက် ပါတယ်။
သူ့ကို ပြည်သူက လိုလားတယ် မလိုလားဘူး ရှင်းရှင်းသိအောင် ပြည်သူ့ဆန္ဒ ခံယူပွဲ လုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ ဟိုအမျိုးသမီးက ပြောတော့ ဒီလိုလဲမဟုတ်ပြန်ဘူး။ ပြည်သူကမလိုလားလို့ အစိုးရ နုတ်ထွက်ဖို့ဘဲ ဇွတ်တောင်းဆိုနေပေမဲ့ ပြည်သူဆိုပီး အနယ်နယ် ကစုလာတာ သိန်းဂဏန်း လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကို ထောက်ခံထားတာက လူဦးရေ ၆သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဗန်ကောက်တမြို့ထဲတင် ၃သန်းမကဘူး။
ဒါပေမဲ့ ယင်လပ်ရဲ့ဗျူဟာကတမျိုး သမားရိုးကျတုံ့ပြန်မှုမျိုးမဟုတ်။ အစကနေအဆုံး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ ​လုပ်ဖို့အတွက် ​တံခါးဖွင့်ထားဆဲဖြစ်တဲ့အကြောင်း ​ဖွဲ့စည်းပုံ ​အခြေခံဥပဒေအတွင်း ​ဥပဒေနဲ့အညီ ​လုပ်ဆောင်နိုင်သမျှ ​ဆွေးနွေးမှုတွေကို ​လုပ်ဆောင်ဖို့ ​ဆန္ဒရှိကြောင်း ​ပြောဆိုထားသည်။
အစိုးရ ၀န်ကြီးဌာနတွေ ရဲဌာနချုပ်တွေကို ကာကွယ်ဖို့ အစိုးရမှာ တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းက လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အပြည့်ရှိပေမဲ့ အသုံးမပြုခဲ့။
ဝန်ကြီးချုပ် ရုံးနဲ့ ဘန်ကောက် တိုင်းရဲရုံး အရှေ့မှာ သွပ်ဆူး ကြိုးတွေ ကွန်ကရစ် တုံးတွေနဲ့ အဆင့်ဆင့် ကာထားကာ အတွင်းပိုင်းမှာ ရာချီတဲ့ ရဲတွေက ဒိုင်းတွေ ကာပြီး ကာကွယ်ထားသည်ကို ဆန္ဒပြသူတွေက သွပ်ဆူးကြိုး တွေကို သဲအိပ်တွေနဲ့ ဖိချပြီး ဝင်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ ကွန်ကရစ် တုံးကြီးတွေကို မ ထုတ်ဖို့ အတွက် ဘက်ခိုး မြေတူး ကားကြီး မောင်းလာ ပြီး ဆွဲထုတ် တာပါ။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာ ရဲက မျက်ရည်ယို ဗုံးနဲ့ ပစ်လိုက်၊ မျက်ရည်ယို ဓါတ်ငွေ့ ရောစပ် ထားတဲ့ မီးသတ်ပိုက် ရေနဲ့ ထိုးပက်လိုက်နဲ့ နောက်ဆုံး မှာ ရာဘာ ကျည်နဲ့ ပစ်ခတ်တဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တနေ့လုံး လိုလိုပဲ ဆန္ဒပြ သူတွေက ရှေ့တိုးလိုက် ရဲက ပစ်လိုက်နဲ့ ဖြစ်နေခဲ့ပီး
နောက်နေ့မနက်မှာတော့ သွပ်ဆူး ကြိုးတွေ ကွန်ကရစ် တုံးတွေကို အစိုးရဖက်ကဖယ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် နောက်ထပ်
သေကြေ အနာတရဖြစ်ခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေ ခေါင်းမာလေ လူအကြည်ညိုပျက်လေ ဖြစ်စေပါတယ်။
လွှတ်တော်ဖက်မှာတော့ စူထေ့ပ်ရဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုခွဲပြထားရာကနေ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ ​လွှတ်တော်အမတ် ​၁၅၃ ​စလုံး နှုတ်ထွက်ပီး စူထေ့ပ်နဲ့ အတူ ​ဆန္ဒပြပူးပေါင်းကြပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒါဟာလဲ ထိရောက်တဲ့အဆင့်မရပါဘူး။ ပါလီမန် အမတ်နေရာ ၅၀၀မှာ ယင်လတ် ရှင်နာဝပ်ရဲ့ပါတီက အမတ်နေရာ ၂၆၀ အပြင် တသီး ပုဂ္ဂလအမတ်များနဲ့ ပါတီငယ်လေးတွေကို ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ထားဒါကြောင့် ပါလီမန်အသက်ဝင်ဖို့ အဘီဆစ် ၀ဇ္ဇာ ဇီဝနဲ့ သူ့အမတ်မင်များ မရှိလဲ မှုစရာမရှိပါဘူး။
အဘီဆစ်တို့အနေနဲ့လဲ ပါလီမန်ထဲ မနိုင်ဘဲထိုင်နေမဲ့အစား စူထေ့ပ်နဲ့ အတူ ဒီမိုကရတ် ပါတီ က ခေါင်းဆောင် ကို ဦး ဦးစီး တဲ့9March ချီတက် ပွဲ ကိုအားဖြည့်ပီး ယင်လပ် နှုတ်ထွက် သည် ထိ နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲ ၀င်ကြ ဖို့ ပါ။
သို့သော် ယင်လတ်ရဲ့အကွက်ဆန်းက ပါလီမန်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနဲ့ ပြည်သူတွေကို အာဏာပြန်အပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် လတ်တလော ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု သွေးထက်သံယိုမှု ဆုံးရှုံးကြေကွဲမှုတွေနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုလဲ ဆယ်မ သွားခဲ့တာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြန်ဝင်ရင်လည်း နိုင်မှာသိရက်နဲ့ ဝင်မရွေးတော့ဖူးလို့ ပြောသွားတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်လဲ ရှုံးဦးမှာဘဲဆိုတာသိလို့ ခြေကန်ငြင်းပီး ပွဲဆူအောင် လုပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးး သင်းကွပ်သွားသလိုပါဘဲလို့ ကျနော်တို့ဝ်းထဲက ကုန်စုံ စတိုးရောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကပြောပါတယ်။
ဈေးဝယ်ရင်း ရွေးကောက် ပွဲဘယ်တော့လဲလို့ ကျနော်ကမေးလို့ ၂၀၁၄ခု ဖေဖော် ၀ါရီ လ ၂ ရက် နေ့မှာ ကျင်း ပ မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြရင်း နှိပ်ကွပ်သွားတာပါ။
Posted by U NU OF BURMA at 12/10/2013 03:43:00 AM0comments Links to this post
လွှတ်တော် အစိုးရ ဆိုတာရှိသလား?
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့က မြန်မာလွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လတ်ရှင်နာဝပ်တို့ ဘန်ကောက်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းအစိုးရ ဝဘ်ဆိုက်မှာ ဖော်ပြချက်
အရ မြန်မာလွှတ်တော်ဥက္ကဌကနေ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရေး၊ စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ရေး၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အရေးများကို ဆွေးနွေး ခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
သာမန်အားဖြင့်တော့ ဒီသတင်းက အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ကုန်သွယ်နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ (ဒါမှမဟုတ်) ရေနက်ဆိပ်ကမ်း တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီသတင်းက အထူးအဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။ အထူးအဆန်းဆိုတာထက် မဖြစ်သင့်တဲ့ သတင်း တစ်ခုပါ။ ဒီရေနက်ဆိပ်ကမ်း အရှိန်မြှင့်ဖို့တွေ၊ လမ်းကိစ္စ၊ ရေကိစ္စ၊ လျှပ်စစ်ကိစ္စတွေက သူရဦးရွှေမန်းနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ သူရဦးရွှေမန်းဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော်ဆိုတာ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်လို့ ဦးရွှေမန်းကိုယ်တိုင် ခဏခဏပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ ဥပဒေပြုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်းတွေက ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရေး၊ လိုအပ်တဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေအောင် ဆောင်ရွက်ရေးတွေက အစိုးရရဲ့ တာဝန်တွေပါ။ အစိုးရမှာ အဓိက တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေက လွှတ်တော် (သို့မဟုတ်) ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းက ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ သွားဆွေးနွေးတာက လွှတ်တော်အလုပ်မလုပ်ဘဲ အစိုးရရဲ့ အလုပ်တွေကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက် သလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလို လွှတ်တော်က အစိုးရအလုပ် ဝင်လုပ် တာမျိုးကို ဘယ်နိုင်ငံမှာမှလည်း မတွေ့ဖူးပါဘူး။ ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်က ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင် ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းဟာ နိုင်ငံရေးအရ မကောင်းသလို လက်တလော ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ ဖက်စပ်ကုန်သွယ် နေတဲ့ စီးပွားရေးသမားတွေ၊ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း တာဝန်ရှိသူတွေအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေ ပါတယ်။ ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ် ကမ်းစီမံကိန်းအတွက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ဆုံပြီး ဆွေးနွေး အကောင် အထည်ဖော်နေတာ ကမ္ဘာကတောင် သိပါတယ်။ အခု ဦးရွှေမန်းကပါ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ပြီး ဒီကိစ္စဆွေးနွေးနေတော့ ဘယ်သူက အဓိက တာဝန်ယူတာလဲ၊ ဘယ်သူက အစိုးရလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရ ဘယ်နှစ်ခုရှိတာလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံသား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း စီမံကိန်းတွေ၊ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် အစိုးရနဲ့ ဝန်ကြီးတွေကို ဆက်သွယ်ရမှာလား၊ လွှတ်တော်ဥက္ကဌနဲ့ ကော်မတီဝင်တွေကို ဆက်သွယ်ရမလား ဆိုတာကို ဝေခွဲမရဘူးဆိုပြီး ထိုင်း Website တွေထဲမှာ ဖော်ပြနေကြတဲ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွှတ်တော်အစိုးရဆိုတာ ရှိသလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုလည်း အမေးခံနေရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Demo Wave .
Posted by U NU OF BURMA at 12/09/2013 02:49:00 PM0comments Links to this post
South African President Jacob Zuma made the announcement atanews conference late on Thursday, saying "we've lost our greatest son."
Mandela is accompanied by his former wife Winnie, moments after his release from prison in this February 11, 1990 file photo.
For he had marched headlong intoabastion of white Afrikanerdom — the temple of South African rugby — and made its followers feel they belonged in the new South Africa. At the same time, Mandela was himself uneasy with the idea of being an icon and he did not escape criticism as an individual andapolitician, though mugch of it was muted by his status asaunassailable symbol of decency and principle. As president, he failed to craftalasting formula for overcoming South Africa's biggest post-apartheid problems, including one of the world's widest gaps between rich and poor. In his writings, he pondered the heavy cost to his family of his decision to devote himself to the struggle against apartheid.
He had been convicted of treason and sentenced to life imprisonment in 1964 for leadingacampaign of sabotage against the government, and sent to the notorious Robben Island prison. It was forbidden to quote him or publish his photo, yet he and other jailed members of his banned African National Congress were able to smuggle out messages of guidance to the anti-apartheid crusade. As time passed — the "long, lonely, wasted years," as he termed them — international awareness of apartheid grew more acute. By the time Mandela turned 70 he was the world's most famous political prisoner. Such were his mental reserves, though, that he turned down conditional offers of freedom from his apartheid jailers and even foundaway to benefit from confinement. "People tend to measure themselves by external accomplishments, but jail allowsaperson to focus on internal ones; such as honesty, sincerity, simplicity, humility, generosity and an absence of variety," Mandela says in one of the many quotations displayed at the Apartheid Museum in Johannesburg. "You learn to look into yourself."
Thousands died, were tortured and were imprisoned in the decades-long struggle against apartheid, so that when Mandela emerged from prison in 1990, smiling and waving to the crowds, the image became an international icon of freedom to rival the fall of the Berlin Wall. South Africa's white rulers had portrayed Mandela as the spearhead ofacommunist revolution and insisted that black majority rule would usher in the chaos and bloodshed that had beset many other African countries as they shook off colonial rule. Yet since apartheid ended, South Africa has held four parliamentary elections and elected three presidents, always peacefully, setting an example onacontinent where democracy is still new and fragile. Its democracy has flaws, and the African National Congress has struggled to deliver on promises. It isafront runner ahead of 2014 elections, but corruption scandals and other missteps have undercut some of the promise of earlier years. "We have confounded the prophets of doom and achievedabloodless revolution. We have restored the dignity of every South African," Mandela said shortly before stepping down as president in 1999 at age 80.
Nelson Rolihlahla Mandela was born July 18, 1918, the son ofatribal chief in Transkei, one of the future "Bantustans," independent republics set up by the apartheid regime to cement the separation of whites and blacks. Mandela's royal upbringing gave himadignified bearing that became his hallmark. Many South Africans of all races would later call him by his clan name, Madiba, asatoken of affection and respect. Growing up atatime when virtually all of Africa was under European colonial rule, Mandela attended Methodist schools before being admitted to the black University of Fort Hare in 1938. He was expelled two years later for his role inastudent strike. He moved to Johannesburg and worked asapoliceman atagold mine, boxed as an amateur heavyweight and studied law. His first wife, nurse Evelyn Mase, bore him four children. A daughter died in infancy,ason was killed inacar crash in 1970 and another son died of AIDS in 2005. The couple divorced in 1957 and Evelyn died in 2004. Mandela began his rise through the anti-apartheid movement in 1944, when he helped form the ANC Youth League.
He organizedacampaign in 1952 to encourage defiance of laws that segregated schools, marriage, housing and job opportunities. The government retaliated by barring him from attending gatherings and leaving Johannesburg, the first of many "banning" orders he was to endure. Afteratwo-day nationwide strike was crushed by police, he andasmall group of ANC colleagues decided on military action and Mandela pushed to form the movement's guerrilla wing, Umkhonto we Sizwe, or Spear of the Nation. He was arrested in 1962 and sentenced to five years' hard labor for leaving the country illegally and inciting blacks to strike. A year later, police uncovered the ANC's underground headquarters onafarm near Johannesburg and seized documents outlining plans foraguerrilla campaign. Atatime when African colonies were one by one becoming independent states, Mandela and seven co-defendants were sentenced to life in prison. "I do not deny that I planned sabotage," he told the court. "I did not plan it inaspirit of recklessness, nor because I have any love of violence. I planned it asaresult ofacalm and sober assessment of the political situation that had arisen after years of tyranny, exploitation and oppression of my people by whites."
The ANC's armed wing was later involved inaseries of high-profile bombings that killed civilians, and many in the white minority viewed the imprisoned Mandela asaterrorist. Up until 2008, when President George W. Bush rescinded the order, he could not visit the U.S. withoutawaiver from the secretary of state certifying he was notaterrorist. From the late 1960s South Africa gradually became an international pariah, expelled from the U.N., banned from the Olympics. In 1973 Mandela refusedagovernment offer of release on condition he agree to confine himself to his native Transkei. In 1982 he and other top ANC inmates were moved off Robben Island toamainland prison. Three years later Mandela was again offered freedom, and again he refused unless segregation laws were scrapped and the government negotiated with the ANC.
In 1989, F.W. de Klerk became president. This Afrikaner recognized the end was near for white-ruled South Africa. Mandela, for his part, continued, even in his last weeks in prison, to advocate nationalizing banks, mines and monopoly industries —astance that frightened the white business community. But talks were already underway, with Mandela being spirited out of prison to meetawhite Cabinet minister. On Feb. 11, 1990, inmate No. 46664, who had once been refused permission to leave prison for his mother's funeral, went free and walked hand-in-hand with Winnie, his wife. Blacks across the country erupted in joy — as did many whites. Mandela took charge of the ANC, shared the 1993 Nobel Peace Prize with de Klerk and was elected president byalandslide in South Africa's first all-race election the following year.
At his inauguration, he stood hand on heart, saluted by white generals as he sang along to two anthems: the apartheid-era Afrikaans "Die Stem," ("The Voice") and the African "Nkosi Sikelel' iAfrika" ("Lord Bless Africa"). To black South Africans expectingaspeedy new deal, Mandela pleaded for patience. The millions denied proper housing, schools and health care under apartheid had expected the revolution to deliver quick fixes, but Mandela recognized he had to embrace free market policies to keep white-dominated big business on his side and attract foreign investment. For all his saintly image, Mandela had an autocratic streak. When black journalists mildly criticized his government, he painted them as stooges of the whites who owned the media. Whites with complaints were dismissed as pining for their old privileges.
He denounced Bush asawarmonger and the U.S. having "committed unspeakable atrocities in the world." When asked about his closeness to Fidel Castro and Moammar Gadhafi despite human rights violations in the countries they ruled, Mandela explained that he wouldn't forsake supporters of the anti-apartheid struggle. With his fellow Nobelist, Archbishop Desmond Tutu, he set up the Truth and Reconciliation Commission, which allowed human rights offenders of all races to admit their crimes publicly in return for lenient treatment. It proved to beakind of national therapy that would becomeamodel for other countries emerging from prolonged strife. He increasingly left the governing to Deputy President Thabo Mbeki, who took over when Mandela's term ended in June 1999 and he declined to seek another —ararity among African presidents. "I must step down while there are one or two people who admire me," Mandela joked at the time. When he retired, he said he was going to stand onastreet withasign that said: "Unemployed, no job. New wife and large family to support."
Posted by U NU OF BURMA at 12/07/2013 02:16:00 AM0comments Links to this post
နိုဝင်ဘာလ ၂၃ရက်နေ့ ထိုင်းစံတော်ချိန် ညနေ (၅) နာရီ ခွဲခန့်တွင် ဆန္ဒပြမှု ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ဟု ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Boonlert Kaewprasit ဦးဆောင်သည့် Pitak Siam Group မှ ကြေငြာ လိုက်သောကြောင့် ပွဲပီးသယောင် ဖြစ်သွားသော ဗန်ကောက်အခြေအနေမှာ ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ရက် ညအထိ ပွဲမပီးသေးပါ။
အင်အား တစ်သန်း ခန့်နဲ့ ၂ရက်အတွင်း အစိုးရကို ဖြုတ်ချဖို့ ဒီမိုကရက် ထောက်ခံသည့် ခရိုင် (၁၉) ခရိုင်ခန့်နှင့် ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့ လာရောက် ဆန္ဒပြရန် Pitak Saim Group မှ လှုံ့ဆော်ထားခဲ့ သော်လည်း အင်အားက တစ်သောင်း ကျော်ကျော် လောက်သာ ရှိသောကြောင့် အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပေ။
( ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Boonlert Kaewprasit နှင့် ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်များ)
သို့သော် တကယ်တမ်းပွဲမပီးခဲ့ဘဲ အစိုးရကို ဆန္ဒပြသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအခွန်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေထဲကို ၀င်ရောက်စီးနင်းထားခဲ့ကြခြင်း ထိုင်းအာဏာပိုင် များမှ ဆန္ဒပြသူများ အသုံးပြု သွားလာရန် အတွက် လမ်းကြောင်း များကို သီးသန့် ချမှတ် ထားပေးပြီး ဖြစ်သော်လည်း ဆန္ဒပြသူများ ဘက်မှ သတ်မှတ် လမ်းကြောင်း များအပြင် အစိုးရမှ လုံခြုံရေး အရ ပိတ်ပင် ထားသည့် လမ်းကြောင်း များကိုလည်း ဖွင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူ များနှင့် လုံခြုံရေး ရဲများ အကြား တင်းမာမှုများဖြစ်ကာ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှီနာဝပ်က ဘန်ကောက်ခရိုင်အပါအ၀င် ခရိုင်၎ခုမှာ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေကို တနင်္လာနေ့က တိုးချဲ့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
သို့သော် ထိုဆန္ဒ ပြမှုအား ကိုင်တွယ်ရန် စစ်တပ်အားလွဲအပ်မည်မဟုတ်ဘဲ ရဲအင်အားကိုသာ သုံးရန် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှီနာဝပ်ကဆုံးဖြတ်သည်။
“အခု လုံခြုံရေး ယူနေတဲ့ ရဲတွေကို အစိုးရက နံပါတ်တုတ် တွေက လွဲပြီး အခြား ဘာလက်နက် အမျိုးအစားမှ ကိုင်ဆောင်ခွင့် မပေးထား ပါဘူး” ဟု စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိကြီး တစ်ဦးမှ ဆိုပါသည်။
အသုံးပြုခဲ့သည့် မျက်ရည်ယိုဗုံး များမှာလည်း အမျိုးအစား (၃) မျိုးရှိကာ နိုင်ငံတကာ တိုင်းပြည်များမှ ဆန္ဒပြပွဲနှင့် လူထု အကြမ်းဖက် မှုများတွင် အသုံးပြုသည့် နိုင်ငံတကာ အဆင့် အမျိုးအစား များဖြစ်ကြောင်းလည်း ထိုင်းအစိုးရမှ ထိုင်းမီဒီယာ များအား ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
အစိုးရ အဖွဲ့က ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းမှုများ မပြုလုပ်လို ကြောင်း၊ အဆိုပါ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရမည့် နည်းလမ်းအတွက်လည်းဆန္ဒပြ ပြည်သူများနှင့် ဆွေးနွေး
ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် အစိုးရ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူများနှင့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများ
ပြုလုပ်သွားရန် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်က ထုတ်ပြန်သော ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွင် ရင်လပ်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားသည်။ သို့သော်လည်း အစိုးရ ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြသူ များသည် အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖြုတ်ချနိုင်ရန် အတွက် ဆန္ဒပြမှုများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
တပြိုင်နက်ထဲမှာပင် အစိုးရကို ထောက်ခံသော အနီရောင်ဝတ် အဖွဲ့ဝင် ၅ဝ,ဝဝဝ ခန့်သည်လည်း ဗန်ကောက်မြို့ရှိ ဘောလုံးအား ကစားကွင်း တစ်ခု၌ ရင်လပ်နှင့် သက်ဆင်အား ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက် ယနေ့နေ့လည် ၂နာရီနီးပါးအချိန်က Rajamangala Stadium ဘောလုံး အားကစားကွင်းတွင် နေရာတိုးချဲ့ယူသည့် အနီရောင်ဝတ် အဖွဲ့ဝင် များအား Ramkhamhaeng တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများက တားဆီးမှုကြောင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးခဲ့ပီး အနာတရဖြစ်မှုများရှိခဲ့သည်။
အနီရောင်ဝတ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Jatuporn က အနီရောင်ဝတ် အဖွဲ့ဝင် များသည် သံချပ်ကာယဉ်များနှင့် စစ်သားခြောက်သောင်းကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသူများဖြစ်သောကြောင့် Ramkhamhaeng ကျောင်သားများကိုမမှုပါဟု ဆိုသည်။
Posted by U NU OF BURMA at 11/30/2013 08:27:00 PM0comments Links to this post
နှစ်ပေါင်း၁၀၀ စောပီး ကွယ်မယ့် အထောက်အထား
နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ဗီနီရှိ မာယာဒေဝီ ကျောင်းတော်အား ရှေးဟောင်းသုတေသန မြေတူးပညာရှင်များက
နောက်ဆုံးရှာဖွေတူးဖော် တွေ့ရှိချက်များအရ ဗုဒ္ဓဖွားမြင်ရာ ရက်စွဲသည် ရာစုနှစ်တခု ပိုပီးစောသည်ဟု ယူဆကြောင်း အမျိုးသား ပထ၀ီဝင်အသင်းကြီး (National Geographic Society) အပါအ၀င် UNESCO အဖွဲ့ ဂျပန်နှင့် နီပေါအစိုးရများ၏ ထောက်ပံ့ ကူညီမှုဖြင့် လုမ္ဗနီမှ အခြေအနေများကို မှတ်တမ်း မှတ်ရာများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသောက ခေတ်လက် ကျန် အုတ်လွှာများ အောက်ကို တူးဖော်ပြီး သမိုင်းကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည့် လေ့လာသူအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Durham တက္ကသိုလ်မှ ရှေးဟောင်း သုတေသန ပညာရှင် Robin Coningham က ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရစ်မပေါ်မှီ နှစ်ပေါင်း ၂၄၉က အိန္ဒိယ ဧကရာဇ် အသောကမင်းတရား၏ ကဗ္ဗည်း ကျောက်တိုင် စိုက်ထူကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားရာဖြစ်သော သံဝေဇနိယ လေးဌာန အနက်မှ တခု ဖြစ်လာသည့် လုမ္ဗီနီဥယျဉ်သည် မယ်တော်ဖြစ်သူ မာယာဒေ၀ီက သစ်ပင်တပင်ကို ဆုပ်ကိုင်အားယူရင်း ဗုဒ္ဓဖြစ်လာမည့် သိဒ္ဓတ္ထ မင်းသားကို မွေးဖွားခဲ့သည့် ဥယျာဉ်နေရာဖြစ်သည်။
မူလ သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရမူ ဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္တမင်းသားသည်
သေတကေတုနတ်သားဘ၀မှ စုတေ၍ မယ်တော်မာယာ၏ ၀မ်းကြာတိုက်၌ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၇ ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့် ကြာသပတေးနေ့၌ ပဋိသန္ဓေယူပြီး မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ (ခရစ်တော်မပေါ်မီ သက္ကရာဇ် ၅၆၇ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်သည်။) ဘုရားလောင်းသိဒ္ဓတ္တသည် မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇ ခု၊ သက်တော် ၂၉ နှစ်တွင် တောထွက်တော်မူသည်။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွင် ဘုရားစင်စစ်ဖြစ်တော်မူသည်။ သက်တော် ၈၀ ၊ သက္ကရာဇ် ၁၄၀ ခုနှစ်တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူသည်။ (ခရစ်တော်မပေါ်မီ သက္ကရာဇ် ၄၈၇ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်သည်။)
ယခုတွေ့ရှိချက်က တမျိုးပြောလေပြီ။ ထိုတွေ့ရှိချက်မှန်ကန်လျှင် ဘုရားသာသနာဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ တည်တံ့မယ်လို့ ဘုရားရှင် က ဟောပြောခဲ့ကြောင်း အဆိုရှိရာ သာသနာကွယ်ရန် ရာစုတခု စောသွားလေပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ မဂ်ညဏ် ဖိုလ်ညဏ် နိဗ္ဗာန် ရစေဖို့ ဆောင်ရွက်ဖို့ ကာလတိုသွားဘီ ဖြစ်ကြောင်း။
Posted by U NU OF BURMA at 11/27/2013 11:12:00 AM0comments Links to this post
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေး တုတ်ကွေး
ထိုင်နိုင်ငံမှာ ရေဘေး လေပြင်းမုန်တိုင်းအန္တရယ် စတာတွေ ကင်းစင်နေရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး တုတ်ကွေး ရောဂါကတော့ ပြင်းထန်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်လာပြန်ပါဘီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က လူတွေသေကြေခဲ့ရတဲ့ ဆန္ဒပြမှုတွေနောက်ပိုင်း နိုင်ငံရဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေလို့ ဆိုနိုင်လောက်အောင် ၀န်ကြီးချုပ် ရင်လပ် ရှင်နာဝပ် အစိုးရ အဖွဲ့ကို ဆန့်ကျင်သည့် အကြီးမားဆုံး ဆန္ဒပြမှု တစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒပြသူ ထောင်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
အစိုးရကို ဆန္ဒပြသူတွေဟာ ထိုင်းနိုင်ငံအခွန်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေထဲကို ၀င်ရောက်စီးနင်းထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဆန္ဒပြသူ ထောင်ပေါင်း များစွာဟာ အစောပိုင်းက ငြိ်မ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြရန် မျှော်မှန်း ထားသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြသည့် နေရာ အနီးရှိ လမ်းပေါ်တွင် စိုက်ထူထားသည့် အတား အဆီး များကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားခဲ့သည့် အခြေအနေကြောင့် ဆန္ဒပြသူ များကို လူစုခွဲရန် အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က မျက် ရည်ယို ဗုံးများ ပစ်ခတ် ခဲ့သည့် အခြေအနေ ရောက်လာသည်။
ပြည်တွင်း လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေ အရ ပိတ်ဆို့ ထားသော ဗန်ကောက်မြို့ လမ်းမများ ပေါ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅ဝဝဝဝ ကျော် တပ်ဖြန့် ချထားသည့်အခြေအနေတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက် အစောပိုင်းက ပထမ အကြိမ် အဖြစ် မျက်ရည်ယို ဗုံးများ ပစ်ခတ် ခဲ့သော်လည်း ဒဏ်ရာ ရရှိသူ တစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ မရှိကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ဆန္ဒပြသူ များကို မျက်ရည်ယို ဗုံးများဖြင့် ဒုတိယ အကြိမ် မြောက် ပစ်ခတ် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ယင်လပ်ရှီနာဝပ်က ဘန်ကောက်ခရိုင်အပါအ၀င် ခရိုင်၎ခုမှာ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေကို တနင်္လာနေ့က တိုးချဲ့ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့၊ အစိုးရလုပ်ငန်းတွေကို မထိခိုက်ဖို့၊ ပြည်သူတွေရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့၊ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ဘန်ကောက်ခရိုင်၊ နွန်ထရ ဘူရီခရိုင် အပါအ၀င် စမွတ်ပရာကန် ခရိုင် နဲ့ ပသုံဌာနီ ခရိုင်တွေ က နေရာတချိူ့ မှာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေကို တိုးချဲု့ပြဋ္ဌာန်းလုိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်ဟု ကြေငြာသွားသည်။
၀န်ကြီးချုပ်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဓိကလေဆိပ်ရှိတဲ့ စမွတ်ပရာကန် ခရိုင်ကို ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အစိုးရရုံးဌာနတွေထဲအထိ အတင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကိုတော့ အကြမ်းဖက်အင်အားသုံးပြီး နှိမ်နင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးဥပဒေဟာ စစ်တပ်ကို ညမထွက်ရအမိန့်၊ လုံခြုံရေး၊ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေချခွင့်၊ ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ကန့်သတ်မှုတွေလုပ်နိုင်အောင် ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
Posted by U NU OF BURMA at 11/27/2013 08:30:00 AM0comments Links to this post